अल्ट्रासोनिक्स द्वारा क्यानाबिस तेल / CBD Nanoemulsion - हिल्सचर अल्ट्रासाउन्ड टेक्नोलोजी
तपाईं एक अल्ट्रासोनिक पायसीकरण मेशिन प्रयोग गरेर ब्याच वा अविरल मोडमा एक CBD न्यानोमुल्सन उत्पादन गर्न सक्नुहुन्छ। हिलस्चर अल्ट्रासोनिक होमोजाइनाइजरहरू स्थिर सीबीडी न्यानो-इम्ल्शन्स उत्पादन गर्न शक्तिशाली इमल्सिफायरहरू हुन्। भांग तेल इमल्सन (ओ / डब्ल्यू) को अल्ट्रासोनिक उत्पादन एक सजिलो र छिटो प्रक्रिया हो, जुन इष्टतम परिणामबाट विश्वस्त हुन्छ।
क्यानाबिस तेल वा CBD Emulsion
क्यानाबिस तेल इमुल्सन भनेको माइक्रोन-साइज वा न्यानो साइज क्यानाबिनोइड्सलाई निलम्बन हुन्छ क्यानाबिस-, हेम्प-, THC- वा CBD- आधारित उत्पादनहरू जस्तै टिन्चर, क्याप्सूल, लोशन, र ई-सिगरेट भ्याप कार्ट्रिजहरू। क्यानाबिनोइडहरू जस्तै THC, CBD इ। लाईपोफिलिक (= हाइड्रोफोबिक) हुन्। त्यसकारण तिनीहरूलाई पानीमा आधारित सूत्रामा क्यानाबिनोइड फैलाउन गहन कतरनी आवश्यक छ। क्यानाबिनोइडहरू पानीमा घुलनशील हुँदैनन्, तर तिनीहरूले तेल र फ्याटहरू जस्ता गैर-ध्रुवीय घोलकमा राम्रो घुलनशीलता देखाउँछन्। यसको लागि पानीमा क्यानाबिनोइड्सको प्रतिरोधात्मक क्षमता हटाउन उपयुक्त पायसीकरण प्रविधि आवश्यक पर्दछ। तीव्र अल्ट्रासोनिक काभेटेशन राम्रो-आकार, स्थिर इमुल्शन्स (ओ / डब्ल्यू, डब्ल्यू / ओ, डब्लू / ओ / डब्ल्यू, ओ / डब्लू / ओ, माइक्रो- र न्यानोमुल्सन) उत्पादन गर्न राम्रोसँग प्रख्यात र राम्रोसँग प्रविधिको हो।
तेल: तरकारी तेलहरू जस्तै जैतुनको तेल, नरिवल तेल वा MCT तेलले पाचन प्रणालीमा भांगको सक्रिय पदार्थहरूको अवशोषण गर्न मद्दत गर्दछ। क्यानाबिनोइडहरू जस्तै CBD र THC बिरलै तेल वा फ्याट बिना अवशोषित गर्न सकिन्छ। इष्टतम अवशोषण प्राप्त गर्न, भांगका अर्कहरू प्राय: तेलमा इम्सुलिफाई गरिन्छ र त्यसपछि थप एक पायसनमा प्रशोधन गरिन्छ।
पायसीफायर: लेसिथिन, जुन पाउडर, ग्रेन्युलहरू र तरलको रूपमा उपलब्ध छ, एक पायसीकरणकर्ता हो, जुन खाना र औषधी उत्पादनहरूका लागि उपयुक्त छ। क्यानाबिस तेल इमल्शन्सको लागि, लेसिथिन सबैभन्दा साधारण पायसीमा परेको एक हो। अन्य इमल्सिफायरहरू, जसले राम्रो प्रभाव दिन्छ गम अरेबिक वा स्टार्च-आधारित इमल्सिफायरहरू हुन्।
सोन्याक्सको साथ क्यानाबिस इम्युसन तयार गर्ने
स्थिर सीबीडी नैनो-इमुलेशन तयार गर्न आदेशमा, पोलिसेर्बोबेट 80 र लेसिथिनको मिश्रण धेरै राम्रो काम गर्दछ। ओभरपेटेड पूर्व-मिक्स खरीद गर्न कुनै आवश्यक छैन किनकि दुवै एसिटिभहरू खाना-ग्रेडमा सजिलै उपलब्ध छन्।
Polysorbate 80: अल्केस्ट टीडब्ल्यू 80०, स्क्याटिक्स, क्यानार्सेल, पोगासोरब ,०, मोन्टानोक्स ,०, बीच 80० को रूपमा पनि चिनिन्छ
लेकिटिन: लिपोइड उच्च-स्तरको लेसिथिनको निर्माता हो।
२wt% सीडीबी न्यानोमुलसन (पानीमा तेल) को लागी प्रयोग गर्नुहोस्: २wt% CBD तेल, २wt% Polysorbate ,०, १wt% Lecithin, w wwt% पानी
Wwt% CDB न्यानोमुलन (पानीमा तेल) को लागी प्रयोग गर्नुहोस्: wwt% CBD तेल, 3. 3.wt% Polysorbate ,०, १.7wt% Lecithin, w ० wt% पानी
अल्ट्रासोनिक ऊर्जा आवश्यकता: अनुमान। 40 देखि 70 माइक्रोन को उत्परिवर्तन मा 300 देखि 400Ws / g sonication ऊर्जा को।
तेल मिश्रण: तयारीको लागि, लगभग प्रीमिक्स। M० एमएल जैतुन तेलको साथ ह्यास तेल (उदाहरण BHO) को १०mL!
तेल-इन-वाटर-नानोइमुल्सन: क्यानाबिसको तेल इमुल्सन तयार गर्न, लगभग एक बिकोर लिनुहोस्। १०० मिली पानी। पायसीको रूपमा, लगभग जोड्नुहोस्। तरल सोया लेसिथिनको १०-१-15 ग्राम। पानीको कोठाको तापक्रम हुनुपर्दछ। Sonication समयमा तापमान नियन्त्रण गर्न पानी नुहाउने मा पानी बेकर राख्नुहोस्। पानीले बेकरमा UP400St को Sonotrode विसर्जन गर्नुहोस्। Sonication को लागि, %०% आयाममा सेट गर्नुहोस्। बिस्तारै ह्यास तेल / जैतुनको तेल मिक्स गर्नुहोस् कोठाको तापक्रमको पानीको १०० मिलिमिटर पानीमा पानीलाई सोनिकोइating्ग बनाउँदा एउटा न्यानोमुलसन बनाउनुहोस्। एक राम्रो पायस सुधार गर्न को लागी, तेल प्रिमिक्स दायाँ Sonotrode अन्तर्गत एक eyedropper वा सिरिन्ज प्रयोग गरेर पानीमा जोड्नुहोस्।
ठूला पैमाने को सेटअप को लागी एक Hielscher Insert MPC48 प्रयोग गर्नुहोस् सीबीडी तेल सिधा अल्ट्रासोनिक Sonotrode अन्तर्गत cavitational क्षेत्र मा इंजेक्ट गर्न।
क्या तपाईं आफ्नो कैनबिस तेल उत्पादन को लागि इष्टतम पायसीफायर / सर्फैक्टेंट को खोज मा मदद को खोज रहे हो? DrRich संग सम्पर्क मा प्राप्त गर्नुहोस, स्थिर सीबीडी नैनोमोलेमियन्स को लागि इमुलेशन मा विशेष सलाहकार! यहाँ थप जानकारी डाउनलोड गर्नुहोस्!
नानो दायरामा उत्कृष्ट इम्ल्शन्सको तयारी गर्न अल्ट्रासोनिक cavitation एक धेरै प्रभावी पायसीकरण विधि हो। टर्बिडिटी (माइक्रो-इम्ल्शन्स, लगभग १ to० देखि १००mm) को साथ पायसको Sonication तिनीहरूलाई पारदर्शी वा स्पष्ट र पारदर्शी बनाउँछ, किनकि यसले सीबीडी ड्रपलेट आकारलाई घटाउने थोप्लाहरूमा घटाउँछ। १०nm यसले इम्शन स्थिरतामा उल्लेखनीय वृद्धि गर्दछ। अल्ट्रासोनिक रूपमा उत्पादित पायसहरू प्रायः एक स्थिर वा सर्फ्याक्टन्टको थप बिना आत्म-स्थिर हुन्छन्।
क्यानाबिस तेलको लागि, न्यानो इमल्सिफिकेशनले क्यानाबिनोइड्स अवशोषण (जैव उपलब्धता) सुधार गर्दछ र अधिक गहन प्रभाव पैदा गर्दछ। तसर्थ कम क्यानाबिस उत्पादन खुराकले तपाईंलाई उस्तै प्रभावहरू दिन सक्छ।
अल्ट्रासोनिक प्रोसेसर UP400St CBD तेल emulsion को लागी।
क्यान्बिस तेल पाउडर
CBD को Liposomal Emulsion
लिपोसोमल सीडीबी वा लिपोसोमल टीएचसी औषधि र प्रसाधन सामग्रीको रूपमा उत्पादन गर्न अल्ट्रासोनिकेसन प्रिफर्ड विधि हो। लिपोसोमहरू सक्रिय औषधि कम्पोनेन्टहरूका लागि लिपिडमा आधारित न्यानोकारियर्स हुन्, जसले सीयोडी वा टीएचसी जस्ता सक्रिय पदार्थहरूको जैव उपलब्धता र चिकित्सीय प्रभावहरू सुधार गर्दछ। किनकि क्यानाबिनोइडहरू साँच्चै नाजुक अणुहरू हुन्, तिनीहरू अक्सीकरणद्वारा गिरावटको साथ साथै बिभिन्न एन्जाइमहरूद्वारा गिरावटको सिकार हुन्छन्। Liposomes मा CBD वा THC को Nano-encapsulation, क्यानाबिनोइड्सको गिरावट रोक्दछ। Sonication प्रभावी ढंगले cannabinoids लाईपोजोममा समाहित गर्न सक्दछ।
सक्रिय पदार्थहरूको लिपोसोल एन्केप्स्युसनको बारेमा थप पढ्नको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्!
THC / CBD Nanoemulsion स्थिरता
लामो अवधिमा स्थिर तेल-इन-वाटर (ओ / डब्ल्यू) न्यानोमुल्सन उत्पादन गर्न, उपयुक्त सर्फ्याक्ट्यान्ट प्रयोग गर्न वा लिपोफिलिक बायोएक्टिभ यौगिकहरूलाई वाहकको तेलमा समाहित गर्ने लिपोसोम गठन गर्न आवश्यक छ। भांग तेलको लागि, क्यारियर तेलसँग खानाको गुणस्तर हुनुपर्दछ र यसले अन्तिम उत्पादको उपस्थिति, स्वाद, वा स्थिरतामा हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन। नरिवल तेल (MCT) र जैतुनको तेल क्यानाबिनोइड्सका लागि राम्रो क्यारियर तेल हो। क्यारियर तेलहरू भौतिक विज्ञान र स्थिर इमल्सन सिर्जना गर्न धेरै महत्त्वपूर्ण कारक हुन् किनकि यसले ओस्टवाल्ड पाक्ने बिरुवालाई पनी रोक्न मद्दत गर्दछ। ओस्टवाल्ड पाक्ने चालक शक्ति हो जसले ड्रपलेट कोर्सनेसनले इमल्सनलाई अस्थिर बनाउँछ। ओन्स्वाल्ड पाक्ने बिरुवामा लामो श्रृंखला ट्राइग्लिसेराइड न्यानोमुल्सन दीर्घ-अवधि स्थिर हो। जैतुनको तेल र नरिवलको तेलले लामो चेन ट्राइग्लिसराइड्स समावेश गर्दछ, ता कि दुबै, जैतुन र नरिवल तेल THC वा CBD का लागि उपयुक्त वाहक तेल हुन्।
Nanoemulifications लागि अल्ट्रासोनिक उपकरण
हिल्सचर अल्ट्रासोनिक्स शक्तिशाली र भरपर्दो अल्ट्रासोनिक प्रणालीहरूको लागि अग्रणी आपूर्तिकर्ता हो। यसले माग शर्त अन्तर्गत ठूलो खण्डहरूको प्रशोधनको लागि प्रयोगशाला र बेन्च-शीर्ष उपकरणहरू देखि पूर्ण औद्योगिक मेशिनहरू सम्म पूर्ण दायरा कभर गर्दछ। साधारण अनुप्रयोगहरू वा हिल्सचर अल्ट्रासोनिक मेशिनहरूमा नक्कल, होमोजीनाइजेसन र खाना र पेय पदार्थको साथै औषधि वा प्रसाधन सामग्री उद्योगको लागि समावेश छ।
इमल्शन ब्याच भोल्यूम
को बारे मा अधिक पढ्नुहोस् भांगबाट निकासी!
THC र CBD Nanoemulsion
Nanoemulsion पनि miniemulsion वा submicron इमल्शन भनेर चिनिन्छ। Nanoemulsion २० र n००nm को बीचको थोपा आकारको इमल्सनहरू हुन्। एक न्यानोमुल्सन एक थर्मोडायनामिकली स्थिर आइसोटोपिक प्रणाली हो, जसले दुई प्रतिरोधात्मक तरल पदार्थहरू (जस्तै तेल र पानी) समावेश गर्दछ। दुईवटा अमिस्कृत तरलमध्ये एउटा एक चरणको लागि दोस्रो चरणमा धेरै राम्ररी फैलाइन्छ। इमुल्सिफायरहरूको थपको रूपमा, उदाहरणका लागि सर्फ्याक्टन्टहरू र सह-सर्फेक्टन्टहरू ड्रपलेट्सको कोलेन्सन्स रोक्दै इमल्सलाई स्थिर गर्दछ। कणहरू / बूंदाहरूको आकार र आकार निरन्तर चरणमा तितरबित हुन्छ कि एक पायस र एक न्यानोमुल्सन बीच मुख्य फरक परिभाषित गर्दछ। ओस्टवाल्ड पाक्ने THC वा CBD न्यानोमुल्सनको प्रमुख अस्थिरता संयन्त्र हो। ओस्टवाल्ड पाक्ने भनेको डिफ्यूजन डिग्रेडेसन प्रक्रिया हो, जसको अर्थ हो कि एक इनहमोजेनियस संरचना जस्तै इमल्सन समयसँगै परिवर्तन हुन्छ। इमल्शन बूँदाहरू समयको बृद्धि हुन्छ जब सानो बूढीहरू भिज्छन् र ठूला बूँदाहरूमा आफ्ना सामग्री पुन: वितरण गर्दछ। तेल प्रकारको अस्टवाल्ड पाक्ने को तीव्रता र दर मा ठूलो प्रभाव छ। यसको मतलब यो छ कि उपयुक्त तेलको छनोटले इमल्सन स्थिरतालाई प्रभाव पार्न सक्छ। Nanoemulsion सक्रिय सामग्रीको एक सुलभ वितरण देखाउँदछ (जस्तै औषधि)।
बेनेन हाश तेलको बारेमा (बीएचओ)
ह्यास तेल विलायक निकासीले उत्पादन गर्दछ, जस्तै अल्ट्रासोनिक एक्स्ट्र्यासन वा अल्ट्रासोनिक-सहयोगी सुपरक्रिटिकल C02 एक्स्ट्र्याक्शन। ह्यास तेलको उत्पादनको लागि, प्राथमिक रूपमा सुक्खा, डेकारबोक्सीलेटेड प्लान्ट सामग्री प्रयोग गरिन्छ। तलका तरल पदार्थहरू प्राय: ह्यास तेल निकाल्नेका लागि सोल्भन्टहरू प्रयोग हुन्छन्: इथेनॉल, क्लोरोफार्म, डिक्लोरोमेथेन, पेट्रोलियम ईथर, नेफ्था, बेंजीन, ब्यूटेन, मेथनॉल, आइसोप्रोपानोल, र जैतूनको तेल। बन्जीन, क्लोरोफॉर्म र पेट्रोलियम ईथर जस्ता गैर-ध्रुवीय घोलकहरूले गाँजा वा चरसको पानी-घुलनशील घटकहरू निकाल्न सक्दैन। यसले अधिक शक्तिशाली ह्यास तेल लिन मद्दत गर्दछ। गैर-ध्रुवीय घोलकको साथ भांग निकासी को निकासी ध्रुवीय घोलक संग निकासी भन्दा राम्रो स्वाद उत्पादन उत्पादन गर्दछ। क्षारको साथ अर्कको धुलाई ह्यास तेलको गन्ध र स्वाद सुधार गर्न सक्छ।
एक एयरटाइट कन्टेनरमा ह्यास तेल भण्डार गर्नुहोस् र यसलाई प्रकाश जोखिमबाट सुरक्षित गरियो। हावा, न्यानोपन र प्रकाशको लागि एक्सपोजरले तेल वृद्धिका कारण यसको स्वाद र मनोवैज्ञानिक गुमाउँछ। ह्याश तेल निर्माणमा थप एन्टिऑक्सिडन्टहरूले यस नकारात्मक प्रभावलाई कम गर्न सक्छ।
भांगमा कम्तिमा ११3 पहिचान गरिएका प्रकारका क्यानाबिनोइडहरू छन्। क्यानाबिनोइड्स साइटोएक्टिभ र / वा चिकित्सा प्रभावहरूको साथ सक्रिय फाइटोकेमिकल पदार्थहरू हुन्। टीएचसी वा टेट्राहाइड्रोकानाबिनोल क्यानाबिसमा प्राथमिक मनोवैज्ञानिक यौगिक हो। CBD वा cannabidiol चिकित्सीय प्रभावहरूको साथ अर्को महत्त्वपूर्ण घटक हो। क्यानाबिनोइड्स लाइपोफिलिक र सम्भावित एसिड-लेबल यौगिकहरू हुन्। क्यानाबिनोइड्स पानीमा अघुलनशील हुन्छन्, तर तिनीहरू ध्रुव-ध्रुवीय घोल (जस्तै फ्याट र तेल) मा धेरै घुलनशील हुन्छन्। क्यानाबिनोइड्सको पाचन सुधार गर्न क्यानाबिस अर्कलाई क्यारियर तेलमा मिक्स गर्नुहोस्।